Nagu saabsan - Henan Zhancheng Trading Co., Ltd.
HENAN ZHANCHENG Trading Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2016 wuxuuna ku yaal Zhengzhou City, Gobolka Henan, saldhigga ugu weyn eisai adduunka. Warshadahayagu waa hormuudka soo saaraha kaas oo ku takhasusay cilmi-baarista, horumarinta iyo soo-saaridda waxyaabaha la tuuro ee caafimaadka sida Goonnada Qalliinka ee aan-xidhka lahayn, Marooyinka, Xirmooyinka/Baakadaha Qalliinka, Isbuunyada, Gawaarida, Alaabooyinka Polymer-ka Sare, Alaabooyinka Suuxdinta, iwm.
Maareeyahayaga guud wuxuu ku dhashay qoys reer miyi ah. Wuxuu ahaa mid dadaala oo aad u darsa tan iyo yaraantiisii. Waalidkiis waxay filayeen inuu noqdo dhakhtar. Wuxuu arkay oo maqlay xanuunno badan oo ay keeneen cudurro, shilal, iyo dagaallo ka socday TV -ga, raadiyaha, iyo wargeysyada. Waxa kale oo uu isbitaalka ku arkay dhibaato bani’aadam, sidaas darteedna wuxuu doonayay inuu dhakhtar noqdo markuu weynaado oo uu wax u qabto adduunka. Laakiin nasiib -darro, wuxuu ku guul -darraystay inuu ku guulaysto imtixaanka gelitaanka kulliyadda laba jeer wuxuuna ku guul -daraystay inuu galo xirfadda caafimaadka. Sannadkii saddexaad, wuxuu isu beddelay dhaqaale. Wuxuu doonayay inuu waxoogaa ku biiriyo adduunka isagoo u maraya ganacsiga dibadda. Markii uu fayrasku dillaacay 2020, agabkii ka-hortagga cudurrada (waji-xidhka, dharka ilaalinta, iwm.) Oo ay soo saartay shirkaddeenna ayaa lagu iibiyay suuqyada Yurub qiimo qaali ah waligeedna macaash ma helin. Dhammaan badeecadaha ayaa u qalma, cabasho ma jiraan.Tani waa dareenka shirkaddayada ee mas'uuliyadda bulsheed ee dalkeenna iyo adduunkaba.
Waxaan nahay shirkad wax soo saar caafimaad iyo adeeg iibsi caafimaad oo caan ku ah Shiinaha waxaanna leenahay nidaam maareyn tayo oo dhammaystiran oo leh ISO9001, ISO13485 iyo shahaadada CE. Alaabooyinkayaga waxaa laga iibiyay in ka badan soddon gobol oo Shiinaha ah waxaana loo dhoofiyay dalal kale oo badan oo adduunka ah. Iyada oo ku saleysan mabda’a “Daacadnimo iyo Daacadnimo, Tayada Koowaad, Faa’iidada Is -weydaarsiga iyo Horumarka Guud”, waxaan sumcad wanaagsan ka helnay macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
Waxaan si diirran u soo dhaweynaynaa dhammaan saaxiibbada iyo macaamiisha ka kala yimid daafaha dunida si ay noo soo booqdaan, oo aan si daacadnimo leh ula shaqeyno si aan u dhisno xiriirka ganacsi ee saaxiibtinimo ee muddada dheer.